Korea iray tafaraka amin'ny fanatanjahantena: fizahantany manaraka?
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany momba ny Korea Avaratra » Korea iray tafaraka amin'ny fanatanjahantena: fizahantany manaraka?
Associations News • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Kolontsaina • Vaovaom-panjakana • Zon'olombelona • Vaovao • Vaovao farany momba ny Korea Avaratra • People • Vaovao farany momba ny Korea Atsimo • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Jona 19, 2018
Ny fanatanjahan-tena dia singa iray mampiray. Cricket dia nahavita zava-mahatalanjona teo amin'ny fifandraisan'i India sy Pakistan, ka angamba mety hanao toy izany koa ny baskety ho an'i Korea Avaratra sy atsimo. Ny filoha Trump dia nanokatra ny varavarana hisian'ny fifandraisana ara-pirahalahiana amin'ny alàlan'ny basikety, ary tsy miafina izany fa ny filohan'i Korea Avaratra Kim Jong-un dia tia basikety.
Trump sy Kim dia manana namana iraisana amin'ny taranja basikety. Ilay kintan'ny fanatanjahantena amerikana Dennis Rodman, mpilalao basikety matihanina efa misotro ronono, dia nankany Singapore mba hifandray tànana amin'ireo mpitarika roa nandritra ny fihaonana an-tampon'ny tantara farany teo.
Korea avaratra sy atsimo dia nanaiky ny hanao lalao basikety finamanana any Pyongyang ny 4 jolay sy any Seoul amin'ity fararano ity, ary te-hamorona ekipa iraisana handray anjara amin'ny Lalao Aziatika 2018 ho avy amin'ny volana Aogositra ao Palembang any Indonezia.
Mandritra ny lanonana fanokafana sy famaranana ny Lalao Aziatika, ny ekipa 2 dia samy handeha ho ekipa iray mitambatra eo ambanin'ny saina iray mitambatra izay hampiseho ny saikinosy Koreana sy ny hiran'ny Arirang nentim-paharazana ho hiram-panahin'izy ireo amin'ny anarana hoe Korea amin'ny fampiasana ny fanafohezana ny "COR . ” Ity no fotoana faha-11 hiarahan'ny ekipa Koreana mitambatra hiara-dia amin'ny hetsika iraisam-pirenena fanatanjahantena marobe.
Tamin'ity herinandro ity dia nisy delegasiona Koreana Tatsimo nitsidika ny Kompleks indostrialy Kaesong ny talata sy alarobia mba hiasa amin'ny fananganana biraon'ny mpampifandray ny sisin-tany, ary talohan'io ny alatsinainy teo dia nisy ny fifanarahana momba ny fanatanjahantena miampita sisintany natao tao amin'ny Peace House any Panmunjom, araka ny voalaza nataon'ny Ministeran'ny Kolontsaina, Fanatanjahantena ary Fizahan-tany.
Ny Vokovoko Mena dia hanao lahateny amin'ny zoma hifanakalozana hevitra momba ny fiarahan'ny fianakaviana nanasaraka ny Ady Koreana 70 taona lasa izay.